Raharaha kidnapping sy mpiasan’ny fananan-tany – Mifanenjana ny ministra sy ireo mpitsara naato – Taratra du 3 avril 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgacheRaharaha kidnapping sy mpiasan'ny fananan-tany - Mifanenjana ny...
Dysfonctionnement de l'appareil judiciaire malgacheLe cerveau présumé d'un rapt libéré par la chambre d'accusationLutte contre la corruption à MadagascarNEXTHOPERANARISON TsilavoRANDRIANASOLO Jacques
Hentitra ny valin-kafatry ny minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques, manoloana ny fampitandreman’ireo mpiasan’ny fananan-tany sy ny momba ireo mpitsara miisa efatra naato amin’ny asany any amin’ny fitsarana any Toamasina. Hihenjana ny raharaha eo amin’ny telo tonta.
“Tsy maintsy ampiharina ny lalàna ary tsy anavahana na iza na iza”, hoy ny minisitra, omaly teny Faravohitra. Notsiahiviny tamin’izany fa efa nampitandrina ny tenany sy ny praiminisitra tany Toamasina, ny herinandro lasa teo fa tsy azo avoaka ny fonja ilay tompon’antoka amin’ny fakana an-keriny. Tiany ambara amin’izany i Manantena Haja Nirina Dina, kandidà depiote any Ifanadiana. “Mbola navoaka ihany izy io nefa anisan’ny atidohan’ny kidnapping. Mety misy ambadika kolikoly izany ka afaka mampiato azy amin’ny asany ny minisitera. Tsy niseho intsony ny fakana an-keriny hatramin’ny nihazonana am-ponja azy”, hoy izy.
Nampiakatra ny raharaha amin’ny filankevi-panjakana
Nohitsiny fa zon’izy ireo ny manohitra. Na ireo mpitsara miisa efatra ao Toamasina naato amin’ny asany ary, nampiakatra ny momba azy ireo eny anivon’ny filankevi-panjakana na ireo mpiasan’ny fananan-tany mikasa ny hiroso amin’ny fitokonana manoloana ny nampidirana am-ponja vonjimaika (MD) ireo mpiara-miasa amin’izy ireo. “Tsy hampihemotra antsika izany fa ho an’ny rehetra ny lalàna. Nahoana ny Villa Elisabeth sy ny zaridaina Antaninarenina no namidy nefa fananam-pirenena ? Sarotiny amin’ny tanintsika robaina isika ary misy ny lalàna. Zon’izy ireo ny mitokona, saingy ny lalàna mihatra hatrany”, hoy ihany ny minisitra.
Hohafainganina ny fitsarana ireo voafonja…
Ankoatra izany, nambaran’ny minisitry ny Fitsarana fa hiezaka ny hanafainganana ny fitsarana ireo voafonja ny eo anivon’ny minisitera. Niaiky ny tenany fa efa nisy ny fitsarana nandeha nefa maro koa ireo mpanao heloka vaovao. “Misy telo mivoaka voatsara ohatra nefa 10 be izao indray ny miditra ka marobe ireo tsy mbola voatsara. Efa miezaka ny hampihena izany ny fitsarana”, hoy ihany izy. Etsy andaniny, efa hirosoana koa ny fanatsarana sy fanitarana ny fonja, saingy tsy vita indray mandeha izany. Noraisiny ho ohatra ny hanorenana fotodrafitrasa any Arivonimamo hamindrana ireo voafonja sasany etsy Antanimora.
Tsiahivina fa nentina am-bavaka tetsy amin’ny Ekar Faravohitra, omaly ny faha-60 taon’ny fandraharahana ny fonja eto amintsika.
Previous articleTezitra ny tantsaha mpamboly fa navotsotry ny fitsarana ny mpangalatra lavanila tratra am-bodiomby tany Vavatenina – Taratra du 2 avril 2019
Next articleMinisitry ny fitsarana – Tsy hilefitra amin’ny fampiharana ny lalàna ny Fanjakana – Inona no Vaovao du 3 avril 2019